Ubani Ophendula Inhlolovo Yakho? Ukuqinisekisa Kwenziwe Lula | Martech Zone
Ubani Ophendula Inhlolovo Yakho? Ukuqinisekisa Kwenziwe Kulula
NgoMsombuluko, Mashi 26, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UHanna Johnson
Ukucela izimpendulo zabathengi ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuqalisa ibhizinisi elisha kuyindlela enhle yokuthola ukuthi ulinganisa kanjani emehlweni amakhasimende akho. Awufuni neze ukucabanga ukuthi uyazi ukuthi imakethe yakho eqondisiwe (omama abasebenzayo abaneminyaka engama-30 kuya kwengama-45, ngokwesibonelo) izwa kanjani ngalokho okwenzayo, ikakhulukazi ngoba kulula ukuzibuza wena ngokwakho. Izindaba ezimnandi zabakhangisi, noma ngabe usebenza enkampanini enkulu noma ekuqaleni okuncane, ukuthi kunamathuluzi amaningi atholakalayo wokukusiza ngomsebenzi wokufinyelela ekuhloleni imakethe yakho oqonde kuyo, kungakhathalekile isabelomali sakho noma izinga lakho ubuchwepheshe.
Thumela i inhlolovo online ukuze ufunde kabanzi ngamakhasimende akho, ukuthi bazizwa kanjani ngemikhiqizo yakho emisha, ukuthi yini abangathanda ukuyibona kuwe ngokuzayo, nokuthi hlobo luni lomyalezo oluzobathinta kakhulu. Unenketho yokuhlola amakhasimende akho ngqo, noma ungadlula enkampanini yeqembu lesithathu ukuze uthenge imibono yabaphenduli bakho. KuSurveyMonkey, sinikela I-SurveyMonkey Izilaleli ukukuxhumanisa namakhasimende nababambiqhaza ongathanda ukufinyelela kubo.
Kepha kuthiwani uma ophendulile ocwaningweni lwakho, athi ungowaseMelika waseMexico oneminyaka engama-35 osebenza embonini yezokunakekelwa kwempilo futhi onezingane ezi-2, empeleni ungumakhenikha omhlophe, ongasebenzi emsebenzini oneminyaka engu-18 ogama lakhe linguFrank? Izinqumo ozenzayo ngemiphumela yocwaningo lwakho lokwaneliseka kwamakhasimende zithembeke kuphela njengolwazi onalo ngabantu abenza inhlolovo yakho.
At SurveyMonkey, sinamaqembu wonke asebenzela ukuthola izindlela ezingcono zokuqinisekisa ubunikazi bama-panelists enhlolovo. I- Ithimba le-TrueSample iyasebenza I-RealCheck Postal ne-RealCheck Social, izixazululo eziqinisekisa ubunikazi babaphenduli bocwaningo ngegama labo nekheli nekheli le-imeyili, ngokulandelana. Le ndlela yezandla ezimbili yokuqinisekisa ukuphendula kwabaphendulayo yenzelwe ukuqinisekisa ubunikazi bokuqina ngisho nokuphendula abaphendulayo, njengabaneminyaka engu-18 kuya kwengama-24 ubudala (uxolo uFrank).
Siphinde sibe noDkt Phil nethimba lakhe le- izindlela zokuhlola abasebenza ukukhomba labo bagculisi abakhathazayo, abantu abasheshisa ocwaningweni lwakho ngaphandle kokukunikeza isikhathi nokunaka okulifanele. Indlela kaDkt Phil incike ekutheni Ukucabangela kweBayesian, indlela ekhomba ama-non-sequiturs anengqondo (ophendulayo akhomba njengendoda, ngokwesibonelo, bese kuthi embuzweni olandelayo aphendule "yebo," empeleni ukhulelwe eminyakeni emithathu eyedlule).
Ukuqinisekisa ubunikazi babaphenduli bocwaningo kungubuciko nesayensi, kepha izindaba ezimnandi ukuthi awuwedwa ekufuneni kwakho abaphenduli bocwaningo abathembeke kakhulu. Kunabantu abahlakaniphe kakhulu abaphonsa futhi baphenduke ebusuku, abakwazi ukulala becabanga ngendlela engcono yokuqinisekisa abaphenduli bakho. Ngokuzimisela. Ngoba abaphenyi abangcono, abaqinisekisiwe bocwaningo kusho imiphumela yocwaningo ethembekile. Imiphumela ethembekile yocwaningo isho izinqumo ezingcono ezisuselwa kuleyo miphumela. Futhi ukwenza izinqumo okungcono kukwenza ubukeke muhle, okusenza sizizwe sihle. Wonke umuntu uyawina. Ngaphandle kukaFrank.
Tags: Iposi le-RealCheckRealCheck Komphakathiophendulile ocwaningweniSurveyMonkeyI-TrueSampleqinisekisa
Usebenzisa iPinterest Ukubandakanya Abasebenzisi kanye ne-Boost SEO
Sawubona Hana, zikhona yini izibalo ezitholakalayo eziqinisekisa ukuthi ucwaningo lweSurveyMonkey luthembekile futhi lusebenza? Ngifuna ukuyisebenzisela iphrojekthi yocwaningo futhi kufanele ngifakazele ubuqiniso nokwethembeka.